यीनै हुन् कुनै दिन श्रीमानले छोडेपछि सडकमा झाडु लगाउन बाध्य आशाले सरकारी अधिकृतमा नाम निकालिन ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/यीनै हुन् कुनै दिन श्रीमानले छोडेपछि सडकमा झाडु लगाउन बाध्य आशाले सरकारी अधिकृतमा नाम निकालिन !
एजेन्सी । कडा मेहनत, समर्पण र आत्मविश्वास । यी केही शब्द मात्र होइनन् । त्यहाँ व्यवहार र जीवन बिताउने तरिकाहरु छन् । यो सकारात्मक दृष्टिकोणसँग भारत राजस्थानको एक नगरपालिकाकी कुचिकारको गहिरो नाता छ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
जसलाई अहिले भारतभरका युवाहरुको उदाहरण बनाएको छ । वास्तवमा, हरेक वर्ष हामी सुन्ने गछौं कि एक रिक्शा चालक, जुत्ता बनाउने वा एक ढाबावाला व्यक्तिको छोरा वा छोरी एक प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा को परीक्षा पास भएको छ ।
हामी सबै यस्तो समाचार पढेर छक्क छौं । यो हुन्छ किनकि एक समाज को रूप मा, हामी रिक्शा, जुत्ता बिक्रेता, ढाबा चालक आदि लाई सम्मान संग हेर्दैनौं । हामी सोच्छौं कि मजदुर वर्ग र उनीहरुका बच्चाहरु के जीवनमा
ठूलो पद हासिल गर्न सक्षम हुनेछन्? तर आशा कंडाराले भने जस्तै जो कडा मेहनत गर्दछ, सफलता उसको खु ट्टा चु म्ब न गर्दछ । आशा भन्छिन् कडा परिश्रम गरे जस्तो चुनौति पनि पार लगाउन सकिन्छ ।
जोधपुरकी निवासी आशा कंडाराले २०१८ मा राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस परिक्षामा उपस्थित हुने मौका पाइन, जसको नतिजा अहिले आइसकेको छ। र यो परीक्षा पास गरे पछि, उनी अब एक सरकारी अधिकारी बनेकी छिन् ।
प्रशिक्षण पछि, उहाँ सरकारी अधिकृत पदमा पोस्ट गरिनेछ।तर यो बाटो आशा को लागी त्यति सजिलो थिएन। आठ बर्ष पहिले आशा को पति संग झ ग डा भएको थियो ।
पतिले उनलाई छोडेर गए, अब दुई सन्तान हुर्काउने जिम्मेवारी पनि उनीमाथि आयो ।उनले जीविको पार्जनको लागी केहि गर्नुपर्यो । तसर्थ आशा एक पछि अर्को गरी सरकारी जागिर को फर्म भर्दै रहिन्। उनले भनिन्, मैले वर्ष २०१७ मा तयारी सुरु गरें ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****